Pikantsary | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Famaritana ny tsara indrindra amin'ny soavaly
Ny lokon'ny soavaly dia ny singa fototra amin'ny biby. Io toetra io dia nolovaovana. Ny akanjo dia tapa-kevitra fa tsy amin'ny alalan'ny loko fotsiny amin'ny lokon'ny soavaly, fa koa amin'ny fandraisana ny loko, ny lokony, ny tail, na ny maso. Tena mazava ny fisaratsarahana, tsy misy ny fifanoherana. Ny soavaly misy basy dia tsy afaka maniry volo fotsy, ary ny soavaly mena dia tsy afaka manana rantsana mainty.
Rehefa mandre ny feon'ireo Rosiana tranainy taloha ianao mikasika ny "soavaly roa mifanindran-dàlana amin'ny maraina", dia mieritreritra tampoka ianao hoe: maninona moa ny soavaly no inona? Ho an'ireo izay liana ihany koa hianatra ny zava-drehetra momba ity fitafy mahazatra ity, dia holazainay amin'ny an-tsipiriany izany. Ny niandohan'ny anaran'ilay fitongilanana Ny fiavian'ny anarana ny akanjon'ny soavaly dia tsy misy porofo mazava.
Ny loko mikehin'i Miceh: tantara, loko samihafa
Efa hatry ny ela ny soavaly mahavariana miaraka amin'ny fahasoavany sy ny fiandrianana: mainty, ala, poma ... Ireo loko rehetra ireo dia manana "razambe". Sary loko Miceh - tsy misy angano. Tantaran'ny tantara sy ny angano Andeha isika handinika izay loko misy soavin'ny tsirilahy. Ny soavaly an'io akanjo io dia misy volon'ondry miloko volomparasy amin'ny volom-borona ary ny razamben'ny soavaly mainty.
Ny soavaly malemy
Ny soavaly dia biby mahagaga izay mahavariana ny fahasoavany, ny aristoksa ary ny fahamboniana. Ao anatin'ny tontolo maoderina, dia tsy ampy ny soavaly soavaly. Ity akanjo ity dia avy amin'ny akanjo lava, saingy manana loko mamirapiratra. Tantaran'ny tantara Ny soavaly volon-doko maitso dia biby aristokratika.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Pikantsary